Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 uguna dambeeyay CM12 aan rasmi ahayn Android 5.0.1 (Qaabka D802) | Androidsis
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 uguna dambeeyay CM12 aan rasmi ahayn Android 5.0.1 (nooca D802)
Francisco Ruiz | | LG, Tababarada
Qoraalka xiga waxaan ku tusi doonaa sida loo cusbooneysiiyo gacanta LG G2 qaabka caalamiga ah, moodal D802, nooca ugu dambeeyay ee Cyanogenmod CM12 aan rasmi ahayn, nooc ka mid ah Cyanogenmod horeyba wuxuu ugu jiray Android 5.0.1 Iyo in runta, ka dib markaan qaatay tijaabinta maalmo yar oo aan ku leeyahay terminalkeyga, waxaan kuu sheegi karaa inay tahay waxa ugu fiican ee aan ku rakibo LG G2 illaa iyo inta laga helayo Android Lollipop.
Cusboonaysiintaan cusub, weli waa la tixgelinayaa aan rasmi ahayn Cyanogenmod 12, Waan hubin karnaa dhammaan hagaajinta uu saaxiibkiis Manuel ka faallooday qoraal dhowaan lagu daabacay Androidsis. Hagaajinta sida muusigga cusub ee cajiibka ah iyo sidoo kale ka mid noqoshada barnaamijka gallery in Google uusan si rasmi ah ugu darin Android Lollipop-ka oo nagu qasbaya inaan isticmaalno arjiga G + Photos.
Mid ka mid ah horumarada aan awooday inaan shaqsiyan ku xaqiijiyo LG G2-kayga tan Nooca ugu dambeeyay ee aan rasmiga ahayn ee Diseembar 15, waa hagaajinta daaweynta batteriga, tan iyo markii sida muuqata imminka la joogo haddii ay gasho hurdo dheer ama hurdo qoto dheer oo qaababkii hore u shaqeyn weyday sidii la rabay, sidaas awgeedna ay daadinayso nolosha batteriga ee LG G2 si weyn.
1 Shuruudaha lagu cusbooneysiinayo LG G2 ilaa Android 5.0.1 Lollipop iyadoo la adeegsanayo tan aan rasmiga ahayn ee CM12
2 Faylasha loo baahan yahay iyo habka rakibaadda ROM
Shuruudaha lagu cusbooneysiinayo LG G2 ilaa Android 5.0.1 Lollipop iyadoo la adeegsanayo tan aan rasmiga ahayn ee CM12
Shuruudaha lagu rakibo tan Rom CM12 aan rasmi ahayn kuweena LG G2 waxay noqdaan kuwa soo socda:
Rujin LG G2 D802 iyo dib u habeyn lagu sameeyay oo la rakibay.
Dib u soo kabashada ayaa la cusbooneysiiyay qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
Batariga ayaa lagu oogay 100 x 100.
Qalad ka saarida USB-ga ayaa laga shiday goobaha.
Kaydinta Nandroid si aan ugu soo ceshano nidaamka sidii aan horey u haysan jirnay kahor inta aan rakibin CM12.
Kaabta Faylka EFS haddiiba ay dhacdo.
Faylasha loo baahan yahay iyo habka rakibaadda ROM
Faylasha loo baahan yahay waxay ku kooban yihiin laba feylood oo isku tiftiran qaab ZIP ah, mid lehna tiisa Rom Cyanogenmod CM12 in ay version of December 15 iyo mid kale oo la codsiyada hooyo ee Google, Gapps, ee Android Lollipop:
Soo Degso CM12 Aan Rasmi ahayn 20141215.
Soo Degso Gapps Android Lollipop.
Marka lagu daro labadan feylood, ee loogu talagalay wareejinta shaashadda adiga kuma shaqeyneyso, mar haddii laba siibood ee hore la shiday AOSP D802 modem waa in lagala soo baxaa taas oo ka dhigi doonta wareegga shaashadu inuu mar kale shaqeeyo.
Marka dhammaan faylasha zip la soo dejiyo, waa inaan nuqul ka dhignaa, iyada oo aan hoos loo dhigin, si toos ah xusuusta gudaha ee LG G2 si aad u iftiimiso. Ka dib waxaan dib ugu bilaabi doonnaa Habka Soo-kabashada, haddii ay suurogal tahay TWRP oo waxaan raacnaa tilmaamahan biligleynaya:
Waxaan galnaa xulashada Tirtir oo waxaan soo xulaynaa dhammaan Nadiifinta marka laga reebo xusuusta gudaha ee LG G2, Waxaan ula jeedaa dhammaan marka laga reebo Kaydinta Gudaha.
Waxaan u dhaqaaqeynaa baarka si aan u fulino ficilka.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib oo waxaan marka hore xulnaa Zip-ka Rom ka dibna Zip-ka Gaabka Gaabka Galoolaha ah.
Waxaan u dhaqaaqeynaa baarka si aan u fulino ficilka la codsaday.
Waxaan aadeynaa xulashada reboot oo aan dooranno Nidaamka reboot hadda.
Marka dib loo bilaabayo terminaalka waxaan horeyba ugu raaxeysaneynaa Android 5.0.1 Lollipop mahadsanidiisa CM12 aan rasmi ahayn. Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid wareejinta shaashadda, waa inaad ka ifiyeysaa modemka aan soo sheegnay ama baseband ka soo kabashada. AOSP KKD802 in waxaad ka heli kartaa isla xiriiriyahan. Modem biligleynaya uma baahna nooc kasta oo masaxid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 uguna dambeeyay CM12 aan rasmi ahayn Android 5.0.1 (nooca D802)
Waxaan haystaa Liquidsmooth rom haddii aan raaco talaabooyinkan wax walba sax miyaa?
Ku jawaab kala02
Waad salaaman tahay, su'aal markii la rakibayo waxay sii ahaanaysaa biligleynaya romka oo horay uma socdo? Waxay horey u laheyd in kabadan 10 daqiiqo horeyna lollipop ayeey ujirtay laakin evomagix romka, maxaan sameyn karaa si aan u rakibo?
Francisco, inta udhaxeysa cm12, evanomagix ama liquidsmooth oo fiican kana xasilloon
Ma ogtahay in g3 daruuro ah ay la soo bixi doonaan android 5.0 LP
waad ku mahadsantahay tabarucaada waxaad tahay ifafaale
Waxaan la joogayaa CM12, iyo su'aasha Cloudy, isla marka aan helno cusbooneysiinta rasmiga ah ee loo yaqaan 'Lollipop update' oo ay ballanqaaday LG, Cloudy wuxuu hubaal u cusbooneysiin doonaa Romskiisa nooca cusub ee Android 5.0, labadaba Stock iyo kuwa dekedaha G3.
OK, aad baad u mahadsan tahay saaxiib
Waxaan isku dayay inaan rakibo cm12 oo way sii socotaa isku dayga inay iftiimiso marwalba laakiin markaa ma dhacdo ... Waxaan haystaa twrp-kii ugu dambeeyay ma garanayo waxa dhici kara
Markaas ayaan mar kale isku dayi doonaa
luis isla waxbaa igu dhaca ... laakiin waxaan ka imid g3 daruuro leh
Caawina fadlan, way igu sii dhalaalaysaa aniga ... Hadda maxaan sameeyaa I caawi
Hoos u dhig awoodda illaa inta ay gebi ahaanba damineyso
Markaa dib u soo kabashada markale oo iftiimiya kaydinta haddii aad haysato… haddii aadan haysan waxaad ka saari kartaa kaydka qalabka lg flash
Waxaa jira casharro ku saabsan internetka mana aha wax dhib ah, waxaad kaliya ku rakibaysaa aaladda flash-ka kombiyuutarka, darawalada, waxaad kala soo bixi kartaa kdz, kii ugu dambeeyay waxaan u maleynayaa inuu ahaa H oo raac talaabooyinka
Haddii aad haysatid usb / otg soo dejiso qol kasta oo ka mid ah USB ... cm11 waa hagaagsan tahay waxaadna galeysaa soo kabashada iyo biligleynta adoo adeegsanaya usb / otg ugu yaraan waxaad isticmaali kartaa moobaylka adoo raadinaya qalabka kdz iyo flash oo aad u dhib badan adiguna adiga kama dhamaan doono inta ay le'eg tahay ... hana iloobin gapps-ka
iima oggolaaneyso inaan soo dejiyo romanka !!
Waan awoodi kari lahaa inaan soo dejisto laakiin waxay sii socotaa biligleynaya wakhti dheer mana dhammaato. Waxaan isku dayay 3 jeer waxbana ... ceeb
Walaalayaal, sidee bay durbaannadu u socdaan? Miyuu ka badan yahay ama ka hooseeyaa saamiga?
walter diaz dijo
Waxaan ku leeyahay cm12 lgg2-kayga runtiina ma jecli aniga. Fikradayda. Kaamiradu waa xun tahay oo batteriga ma sii soconayo sidii uu ahaan jiray. Marka waxaan rabaa inaan dib ugu laabto g3 daruuraha. Ma jiraa qof og in laga bilaabo cm12 aad dib ugu laaban karto g3 daruurta leh?
Ku jawaab walter diaz
su'aal waxaan hayaa lollipop rasmi ah lg laakiin waxaan rabaa in aan dhigo romkaankan. Ma loo baahan yahay in hoos loo dhigo ama kaliya la soo kabashada cusub ee twrp ma fiicantahay?
Wave, codsiga si aad ula wadaagto goobtaada waqtiga dhabta ah si gaar ah
Android 5.0 Lollipop waxay u timaadaa LG G3 bilaash